Jefferson Center - Jefferson Center - Mental स्वास्थ्य and Substance Use Services बाट Coronavirus अपडेट
हाम्रो मूल्यवान ग्राहकहरु लाई
आगामी हप्ताहरूमा "घर मा सुरक्षित" रूपान्तरणको साथ, जेफरसन सेन्टरले हाम्रो स्टाफ र ग्राहकहरूलाई सारिरहेको छ फिर्ता हाम्रो कार्यालयहरुमा क्रमिक र विचारशील तरीकामा। हाम्रो ढोकाबाट आउने सबैको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय जनस्वास्थ्य अध्यादेशहरूसँग पign्क्तिबद्ध गर्दा हाम्रो फिर्ताको मार्गनिर्देशन हुनेछ।
तपाइँको टेलिल्थ अपोइन्टमेन्टहरूको बेलामा के आशा गर्ने भनेर जान्नुहोस्
तपाईको in-অফিস अपोइन्टमेन्टहरूको बेलामा के आशा गर्ने भन्ने बारे थप जान्नुहोस्
कृपया ध्यान दिनुहोस्: गभर्नर जारेड पोलिसले एउटा नयाँ मास्क जनादेश जारी गरेको छ जसमा सबै कोलोराडो निवासीहरू र आगन्तुकहरूले foot फिट सामाजिक दूरी कायम गर्न असमर्थ हुँदा सार्वजनिक सेटि inहरूमा मास्क वा कपडाको अनुहार लगाउनु पर्छ। सबै जेफरसन सेन्टर स्थानहरूले सीडीसीको अनुपालनमा कार्य गर्दछ, जसले सिफारिश गर्दछ कि २ वर्ष भन्दा माथिका सबै आगन्तुकहरूले सार्वजनिक रूपमा मास्क वा कपडा अनुहार लगाउनु पर्छ।। पढ्नुहोस् यहाँ पूर्ण जनादेश.
तपाईं एक्लो हुनुहुन्न - तपाईंलाई सहयोग चाहिएको खण्डमा पुग्नुहोस्
हामीलाई थाहा छ हाम्रो वर्तमान स्वास्थ्य संकटको अनिश्चितता साथै हाम्रो दैनिक जीवनमा परिवर्तनले चिन्ता र तनावको भावना निम्त्याउन सक्छ। कृपया जान्नुहोस् कि तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। हामी केवल एक फोन कल टाढा छौं। कृपया सहयोग पुर्‍याउनुहोस् यदि तपाईंलाई सहयोग चाहिएको छ वा कसैसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने।
हाम्रो समुदायले कसरी मानसिक स्वास्थ्य र पदार्थको उपयोग उपचार पहुँच गर्न सक्दछ:
जुलाईमा नयाँ: हामी हाम्रो ईन्डी र वेस्ट कोल्फ्याक्स स्थानहरूमा टेलिहेल्थ स्टेशनहरू प्रस्ताव गर्दैछौं ग्राहकहरूको लागि जो टेलिहल्थ अपोइन्टमेन्ट निर्धारित गर्न चाहन्छन तर टेक्नोलोजीसँग सहयोग चाहिन्छ।
हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता र वेस्ट कोल्फ्याक्स स्थानहरूमा व्यक्तिगत क्लिनिकल सेवाहरू थपेका छौं र अब सीमित स in्ख्यामा व्यक्तिगत भेटघाटहरूको लागि हाम्रो सदाबहार कार्यालय थप्दै छौं।
औषधि सहयोगी उपचार (MAT) सेवाहरू हाम्रो सदाबहार कार्यालयमा उपलब्ध छन्। साप्ताहिक तालिकाको लागि हामीलाई कल गर्नुहोस्।
सबै आउट पेशेंट थेरेपी सञ्चालन भइरहेको छ फोन र भिडियो मार्फत। भेट्नुहोस् 303०425-0300२XNUMX-०XNUMX०० भेट्ने समय तालिका बनाउन। नयाँ ग्राहकहरु स्वागत छ!
हाम्रो आवासीय कार्यक्रमहरू आगन्तुकहरूको सीमितताको साथ खुला रहन्छन्।
फार्मेसी र नर्सिंग सेवाहरू हाम्रो स्वतन्त्रता र वेस्ट कोल्फक्स स्थानहरूमा अनसाइट उपलब्ध छन्। यी सेवाहरू पहुँच गर्ने जो कोहीलाई COVID-19 लक्षणहरूको लागि जाँच गरिनेछ।
निलो स्प्रस फार्मेसी - दुबै स्थानहरू ग्राहकहरूको लागि कुनै पनि नुस्खाहरू भर्न खुला रहनेछ। फार्मेसीहरू am::8० देखि :30::4० सम्म सोमबार देखि शुक्रवार सम्म खुला छन्।
PAP - यदि तपाई पीएपी कार्यक्रम मार्फत औषधी प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, पीएपी स्टाफले तपाईलाई यी दुई कार्यालयहरू मध्ये एउटामा तेर्सोपचार लिनका लागि निर्देशन दिन्छ जब तिनीहरू तयार हुन्छन्।
नर्सि Services सेवाहरू - नर्सि staff स्टाफ नियुक्तिद्वारा मात्र इन्जेक्टेबल औषधिहरू दिन र मेडिकल बक्सहरू तालिका अनुसार भर्ने, पीएपी औषधीहरू पुर्‍याउने समन्वय गर्न, र आवश्यक परेका संकेतहरू जाँच गर्न र राष्ट्रपतिले आदेश दिए अनुसार उपलब्ध हुनेछ। कृपया an०303-435-0300-०XNUMX०० मा सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई एक अपोइन्टमेन्ट निर्धारित गर्न आवश्यक छ भने।
संकट सेवाहरू २//24 उपलब्ध छन्। यदि तपाईं संकटमा हुनुहुन्छ भने, हामीलाई call०303-425२0300-०844० मा कल गर्नुहोस् वा संकट लाइन (calling calling493) 8255 24 7-4643२80033 मा कल गरेर। २//XNUMX स walk्कट वाक-इन सेन्टर र रकम फिर्ता प्रबन्धन कार्यक्रम XNUMX XNUMX वड्सवर्थ ब्ल्भिड, गहुँ रिज, सीओ XNUMX००XNUMX at मा खुला छ।
हामी हाम्रो समुदायबाट प्राप्त गरेको समर्थन र प्रोत्साहनको प्रश्रयको लागि हामी कदर गर्दछौं। यो तपाईं सबैको कारणले हो कि जेफर्सन सेन्टरले यस समयमा हाम्रो समुदायलाई सुदृढ पार्न र मानसिक स्वास्थ्य मामिलाहरू र हेरचाह सबैको लागि पहुँचयोग्य छ भनेर निश्चित गर्न सक्षम छ।
कृपया यी महत्वपूर्ण हेरचाह सेवाहरू द्वारा समर्थन गर्नुहोस् हाम्रो COVID-19 समर्थन कोषमा योगदान दिँदै हाम्रो कोलोराडो पृष्ठ दिन्छ. तपाईंको दानले हामीलाई भविष्यमा आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य र पदार्थ प्रयोग उपचार प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईंसँग हाम्रो कुनै पनि सेवाहरूको बारेमा प्रश्नहरू छन् भने यी सेवाहरू कसरी पहुँच गर्ने, वा कसरी चीजहरू परिवर्तन भएको छ, हाम्रो मुख्य नम्बरमा कल गर्नुहोस् 303०425-0300२XNUMX-XNUMX-०XNUMX००।
तपाईंको जेफरसन केन्द्र केयर टीम
कोरोनाभाइरसको बारेमा अधिक जानकारीका साथ त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरू छन्:
रोग नियन्त्रण केन्द्र (CDC)
कोलोराडो सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
(जेफरसन केन्द्र) कोरोनाभाइरस वेबिनार श्रृंखलाको साथ सामना गर्दै
COVID-१ During को समयमा शोक र नोक्सानको सामना गर्दै
COVID-19 को बेला तनावको सामना गर्ने स्वस्थ तरिकाहरू
सैन्य मा मानसिक स्वास्थ्य
डिजिटल विश्वमा अभिभावक
COVID-19 को अवधिमा कसरी जडित रहन
आवश्यक श्रमिकहरूका लागि समर्थन - सress्कट र आघातको प्रबन्ध
COVID-19 को समयमा ब्यालेन्स फेला पार्दै
मानेजान्डो एल एस्ट्रेस वा एडापांडो ला ला "न्यूवा नोर्मलिडाड" को COVID-19
(CDC) कसरी आफूलाई जोगाउने
(CDC) के गर्ने यदि तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ
(SAMHSA) सामाजिक दूरी, संगरोध, र पृथकीकरणका लागि सुझावहरू
(मनोविज्ञान आज) कसरी तपाइँको बच्चाहरु संग कुरा गर्ने कोरोनाभाइरस प्रकोप को बारे मा
(न्यू योर्क टाइम्स) कोरोनाभाइरसको बारेमा बच्चाहरूसँग कसरी कुरा गर्ने